Otu esi etinye Google Chrome na Debian 11 - LinuxCapable
Otu esi etinye Google Chrome na Debian 11
Saturday, October 2, 2021 Fraịde, Ọgọstụ 20, 2021 by Jọshụa James
Na-ebubata igodo GPG
Bubata ebe nchekwa Google Chrome
Na-emelite Google Chrome
Wepu (wepu) Google Chrome
Google Chrome bụ sọftụwia Internet Explorer nke a na-ejikarị n'ụwa, yana mmelite na-adịbeghị anya na 2021 na Chrome bụ ihe nchọgharị izizi nke ihe karịrị ijeri ndị ọrụ ịntanetị ijeri 2.65 dị ka ị ga-ama, na-etinye Debian 11, dị ka ọtụtụ nkesa Linux, tinye naanị Mozilla Firefox. Otú ọ dị, wụnye Google Chrome na Debian bụ ọrụ kwụ ọtọ.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye Google Chrome na Debian 11 Bullseye.
Site na ndabara, Debian 11 kwesịrị arụnyere nke a. Ọ bụrụ na-efu, jiri iwu a:
Nzọụkwụ mbụ na ịwụnye Google Chrome bụ ibubata ihe igodo GPG maka mbinye aka dijitalụ; na-enweghị nke a, gị echichi agaghị emecha nke ọma.
Ibubata ihe igodo GPG, jiri iwu a:
Ọ bụrụ na ebubata igodo ahụ nke ọma, ị ga-enweta nsonaazụ a:
Ozugbo mbubata GPG zuru, ị ga-ebubata ebe nchekwa Google Chrome ugbu a dị ka ndị a:
Nzọụkwụ ọzọ bụ imelite ndepụta nchekwa site na iji mmelite dabara wee wụnye Google Chrome. Enwere ike ime nke a n'otu iwu site na iji iwu njedebe na-esonụ:
Ihe atụ nke ihe ndabere nke a ga-etinye:
ụdị Y, wee pịa tinye bọtịnụ ịga n'ihu na nwụnye.
Ozugbo arụnyere, nyochaa ụdị Google Chrome site na iji iwu a:
Ọ bụrụ na ị ga-achọ ịwụnye ụdị beta kachasị ọhụrụ ma ọ bụ nke na-adịghị akwụ ụgwọ (Nightly Build) nke Google Chrome, jiri iwu ndị a.
Iji wụnye Google Chrome na-adịghị akwụ ụgwọ (wuo abalị):
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ ndị a na desktọpụ Debian 11 gị iji meghee ụzọ ahụ: Ihe omume > Gosi ngwa > Chrome. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
The oge mbụ imepee Google Chrome na Debian 11, mmapụta ndị a ga-ekele gị:
Ekele, ị tinyela Google Chrome na sistemụ arụmọrụ Debian 11 Bullseye gị.
Iji melite Google Chrome, na-agba ọsọ Mmelite APT iwu n'ọnụ ọnụ gị:
ụdị Y, wee pịa tinye bọtịnụ ịga n'ihu na iwepụ.
Nke a ga-ewepụkwa ndabere ọ bụla ejighi ya arụnyere na nrụnye Chrome.
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi etinye ma bubata igodo GPG na ebe nchekwa wee wụnye Google Chrome ọhụrụ kwụsiri ike na Debian 11. N'ozuzu, Chrome bụ ihe nchọgharị kachasị eji na mbara ala, yana 70% nke ndị ọrụ na-eji ya. Cheta, ọ nwere ike bụrụ otu n'ime ihe nchọgharị ịntanetị a na-achọkarị maka nrigbu ụbọchị efu. Debe ya ka ọ dị ọhụrụ, ị ga-adịkwa mma.
Otu esi etinye Google Chrome na Linux Mint 20
Otu esi etinye Google Chrome Stable, Beta, ma ọ bụ…
Otu esi etinye Google Chrome na openSUSE Leap 15
Otu esi etinye Google Chrome na Ubuntu 20.04
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, Nchọgharị Google Chrome Mail igodo
Otu esi etinye Python Pip na Ubuntu 20.04